Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, August 07, 2011 Sunday, August 07, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ကျွန်မ ခရီးထွက်ရာက ပြန်ရောက်ပါပြီ။ ချစ်ခင်ရသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို ရုတ်တရတ် နှုတ်မဆက်ဘဲ ဘလောဂ့်ပါပိတ်ပြီး ခွဲခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။ ခရီးက ပြန်ရောက်ရင် ဘလောဂ့်ကို ပြန်ရေးဖြစ်ချင်မှ ရေးဖြစ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ဘလောဂ့်ကိုပါ ပိတ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မဘလောဂ့်သက်တမ်း တစ်နှစ်ကျော် နှစ်နှစ်နီးပါး အတွင်းမှာ အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ ဘယ်သောခါမှ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ဘလောဂ့်ကို ရပ်တန့်ပစ်ခဲ့ဖို့ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘဲ ဆက်ပြီးရေးနေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဘလောဂ့်ကိုလည်း ပျက်သွားလိုက် အသစ်ပြန်လုပ်လိုက်နဲ့ ၈ကြိမ်အထိ ပြန်တည်ဆောက်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
စာမရေးတော့ဘူးလို့ ပြောချိန်မှာ ပြန်ရေးဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ အစ်မနဲ့ ညီမလေးလိုခင်ရသူတို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ဘယ်လိုပင်ဖြစ်စေ လွယ်လွယ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျ အရှုံးပေးတာမျိုး မလုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်မဟာ သူများတကာလို ရသမြောက်အောင် စာရေးကောင်းသူတစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့လည်း မတောက်တခေါက်လေးနဲ့ဘဲ စာတွေ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်လို့ ချစ်သော မိတ်ဆွေများကို အသိပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ပျောက်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာ စိတ်ပူပြီး အီးမေလ်းဖြင့် မေးထားကြသူများ၊ ဖုန်းဆက်ပြီး တကူးတက မေးလာတဲ့ချစ်စွာသော အစ်မများ စီဘောက်မှာ မေးထားတဲ့ ညီမလေးတို့ အားလုံးအားလုံးကို ကျေးဇူး အထူး တင်ပါတယ်နော်။
ရောက်လာကြသူများကို ဘလောဂ့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့ ငါးပေါင်းတစ်မျိုးနဲ့ ကြိုဆိုဧည့်ခံပါမယ်နော်။ အပေါ်က ပုံလေးမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ငါးကို ယပ်တောင်သဖွယ် ပြုပြင်စီမံပြီး ပေါင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ပြောရရင် ဒီငါးပေါင်းနည်းက လက်ဆောင်ရတဲ့ တရုတ်ဟင်းချက်နည်း စာအုပ်ထဲက ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ငါးကိုခုလိုလေးဖြစ်အောင် ဖြတ်တောက်ပြီး ပန်းကန်ပြားပေါ် အလှဆင်ထားတာကို အလွန်နှစ်သက် သဘောကျမိတဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြန်လုပ်စားဖြစ်ချိန်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ပြုလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်ကို ချစ်သော မိတ်ဆွေများအား ပြန်လည်မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ငါးတစ်ကောင်ကို ကြေးထိုး၊ ပါးဟက်ယူပစ်ပြီး ဗိုက်ကို အလျားလိုက်မဖောက်ဘဲ ဦးခေါင်းနဲ့ ကပ်လျှက် ကန့်လန့်ဖြတ် ဖေါက်ကာ အတွင်းမှ ကလီစာများ ယူပစ်ပါတယ်။
ရေစင်အောင်ဆေး၊ ဆူးတောင်များ ဖယ်ပစ်ပြီး ဦးခေါင်းအမြီးများကို ဖြတ်တောက်ပါတယ်။
ထို့နောက် ငါးကို ကျောကုန်းဘက်ကနေ ဝမ်းဗိုက်နားထိ ရောက်အောင် ခုလိုပိုင်းပါတယ်။ သို့သော် ငါးများ အပိုင်းပိုင်း ပြတ်ထွက်မသွားဘဲ တစ်ကောင်လုံး တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေအောင် ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ပျော့အိနေတဲ့ငါး မဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်သလို ခက်ဓားထက်ထက်နဲ့ ဖြတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
အကောင်မပျက် ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ ငါးကို ပန်းကန်တစ်ချပ်ပေါ်မှာ ခုလို ယပ်တောင်ဖြန့်ထားသကဲ့သို့ (သို့မဟုတ်) ဒေါင်းတစ်ကောင် အမြီးဖြန့်ထားသကဲ့သို့ ဖြန့်ခင်းလိုက်ပါတယ်။
ငါးကို အရက် (ဟင်းချက်ဝိုင်) ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်ကြည်၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့်၊ ငရုပ်သီး ကြက်သွန်ဖြူတို့ဖြင့် နယ်ပြီး ၁၀မိနစ်ခန့် ထားလိုက်ပါတယ်။
ဖြတ်ထားတဲ့ ငါးခေါင်းကို ခုလို အလယ်ကောင်မှာ နေရာချပါတယ်။
အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတော့ ငါးပေါင်း ကျက်ပြီဖြစ်လို့ အိုးပေါ်မှချပြီး ငရုပ်သီး၊ နံနံပင်များဖြင့် အလှဆင်ပါတယ်။ ငရုပ်သီးက အပွ အရှည်မျိုး ဖြစ်တာကြောင့် စပ်ဖို့ မပူရဘဲ အလှသက်သက် ပြင်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အမြင်အားဖြင့်လည်း လှ၊ အရသာလည်း ရှိတဲ့ ငါးပေါင်းပါ။ တကယ်လို့များ အချဉ်အရသာလေးနဲ့ စားလိုပါက သံပုရာသီးလေးညှစ်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီငါးပေါင်းကိုတော့ ယပ်တောင်သဖွယ် လှပစွာ ဖြန့်ခင်းထားတာမို့ ကျွန်မက ငါးယပ်တောင်ပေါင်း လို့ အမည် ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်..
ဧည့်သည်လာရင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဟင်းလျာများ ချက်ကျွေးချင်သူများ၊ ယောက္ခမကို ကြွားချင်သူ(တစ်ယောက်သော ညီမငယ်) အတွက် ဒီငါးပေါင်းလေးက သူတို့ရဲ့အာရုံကို အစွမ်းကုန် ဆွဲဆောင်ယူပေးမဲ့ လှပသော ဟင်းတစ်ခွက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။း)
အားလုံး ပျော်ရွှင်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်..
Links to this post 41 comments
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, July 23, 2011 Saturday, July 23, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီတစ်ပတ်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်က စားဖြစ်ခဲ့တဲ့ နာနတ်သီးထမင်းကြော်ကို တင်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။
နာနတ်သီးနဲ့ ထမင်းကြော်တာဟာ ထိုင်းမှာတော့ ဆိုင်တွေမှာတော်တော်လေးရောင်းကောင်းတဲ့ ထမင်းကြော်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားများ အကြိုက်တွေ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နာနတ်သီး ထမင်းကြော်နည်းအတွက် ပုဇွန်နဲ့ ဝက်သားကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ နာနတ်သီး တွေလဲ သိပ်ပေါနေပြီဖြစ်လို့ နာနတ်သီးနဲ့ မကြာခန ဟင်းချက်စားဖြစ်ပါတယ်။
ပုဇွန်များကို ဆား၊ ပဲငံပြည်ရည်၊ အရသာမှုန့်များဖြင့်နယ်ပြီး ခေတ္တ ထားထားလိုက်ပါတယ်။
ထမင်းနဲ့ကြော်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အသီးအနှံများ ( ဥနီ၊ ပဲသီး၊ ငရုပ်ပွ နီ၊ စိမ်း)
နာနတ်သီးတစ်လုံးကို ခုလို ထက်ခြမ်းခြမ်းပါတယ်။
အတွင်းသားများကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
နာနတ်သီးခွံကို လှလှပပ ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။
ဖယ်ထုတ်ထားတဲ့ အတွင်းသားများကို အတုံးလေးများတုံးပြီး ပြင်ဆင်ထားပါ
ပုဇွန်ကို ကြော်ပြီး ပန်းကန်တစ်ချပ်ဖြင့်ထည့်ထားပါတယ်
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, July 21, 2011 Thursday, July 21, 2011 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဗန်းမော်မြို့မှာရှိတဲ့ ဘုရားစေတီများအကြောင်း ရေးရာမှာ ဗန်းမော်မြို့ကနေ ၆မိုင်ခန့်အကွာမှာ ရှိတဲ့ မံရွတ်ဆိုတဲ့ ရွာကလေးမှာ တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ ရုပ်ပွားတော်အကြောင်း ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ချန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းက ဘုရားရဲ့ သမိုင်းကို ပိုစ့်တစ်ခုအနေနဲ့ သီးသန့်ရေးချင်တာကြောင့်ပါ။ အခု ဒီပိုစ့်မှာတော့ အဲဒီ ရွာကလေးမှာ ရှိတဲ့ မံရွတ်ဘုရားရယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ရုပ်ပွားတော်အကြောင်းလေးကို ရေးချင်ပါတယ်။ မံရွတ်ရွာဟာ ဗန်းမော် မန္တလေး ကားလမ်းဘေးမှာ တည်ရှိနေတဲ့ရွာကလေးပါ။ ဗန်းမော်မြို့ကနေ မြစ်ကြီးနားကို သွားလို့ရသလို၊ မန္တလေးကိုလည်း သဘောင်္နဲ့ရော ကားနဲ့ပါ သွားလို့ရပါတယ်။ သင်္ဘောနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်း မန္တလေးကို စုန်ဆင်းတဲ့အခါ အလွန်လှပတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ရဲ့ ရှုခင်းတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗန်းမော်ကနေ တရုတ်ပြည်နယ်စပ် လွယ်ဂျယ်မြို့ကိုလည်း သွားနိုင်ပေမဲ့ ခုလောလောဆယ်တော့ ကားလမ်းခရီးက အဆင်မပြေသေးပါဘူး။
အဓိက ပြောချင်တဲ့ မံရွတ်ရွာကလေးမှာ ထူးခြားတဲ့ မြတ်စွာဘုရား ရပ်တော်မူပုံ ထွင်းထုထားတဲ့ ရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ ဗန်းမော် ရောက်နေချိန်မှာ မိုးရွာနေပေမဲ့ ၆မိုင်ဝေးတဲ့ မံရွတ်ရွာကလေးကို ဘုရားဖူးဖို့ သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။. လမ်းတစ်လျှောက်တွေ့ရတဲ့ စိမ်းစိမ်းစိုစို ရှုခင်းများ လယ်ကွင်းများ၊ ရေတွေပြည့်လျှံနေတဲ့ စမ်းချောင်းများ၊ ပြာပြာလွင်လွင် တောင်တန်းများဟာ အလွန်ဘဲ မျက်စိပသာဒ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး စိတ်နှလုံးကိုလည်း အေးချမ်းစေနိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းဆောင်ရှိရာ တောင်ကုန်းကလေးပ်ါသို့ တက်ရာလမ်း
ထူးခြားတယ်လို့ ပြောရခြင်းက မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ရုပ်ပုံတော်ကို ထွင်းထုထားတဲ့ သစ်သားဟာ ရှားပါးတဲ့ ကျွန်းသားအနက်နဲ့ ထွင်းထုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်မှာ ထုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘုရားဖြစ်တာကြောင့် ရှေးခေတ်လက်ရာကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော် ထွင်းထုထားတဲ့ ကျွန်းသားအနက်ပေါ်မှာ ကျက်သရေရှိလှသော ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူထားတာကြောင့် မူလ ကျွန်းသားရဲ့ အနက်ရောင်ကို မတွေ့မြင်ရပါဘူး။ ဒီ ရုပ်ပွားတော်ထုလုပ်ဖို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲကမှ ရုပ်ပွားတော်ထုလုပ်ဖို့ ရရှိလာတဲ့ ကျွန်းနက်သားကို တွေ့ရှိရပုံက ထူးခြားတာကြောင့် ဒီပိုစ့်လေးမှာ ဖော်ပြချင်တာပါ။
ကျွန်းသားအနက်နဲ့ထုလုပ်ပူဇော်ထားတဲ့ ကုန်းဘောင်ခေတ်ပန်းပုလက်ရာ မြတ်စွာဘုရား၏ ရုပ်ပွားတော်
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, July 19, 2011 Tuesday, July 19, 2011 Labels: စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာစုများ
ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဟာ ပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့ သုံးမိုင်၊ လေးမိုင်ခန့်သာ ဝေးတဲ့နေရာမှာ ရှိပါတယ်။ အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးလှပေမဲ့ ကမ်းခြေကို သွားတိုင်း ကားမောင်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီကမ်းခြေမှာဘဲ ကလေးမလေး တစ်ယောက်ကို စပြီး သိကျွမ်းခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူမအသက်က ၇နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ သူမဟာ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကမ်းစပ်က သဲပြင်ပေါ်မှာ သဲတွေနဲ့ အိမ်ဆောက်တမ်း ဆော့ကစားနေခဲ့ပါတယ်။ ကလေးမလေးရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေ ပြာလဲ့နေတာများ ပင်လယ်ရေပြင်ရဲ့ အရောင်အတိုင်းပါဘဲ။
သူမလေးက ကျွန်တော့်ကို အရင်နှုတ်ဆက်တော့ ကျွန်တော်က ခေါင်းလေး တစ်ချက်လောက်သာ ညိတ်ပြလိုက်ပြီး ကလေးမလေးရဲ့ နှုတ်ဆက်စကားကို ပြန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းဖို့ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်တော်အတွက် ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဟက်ဟက်ပက်ပက် ပြန်မပြောမိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ "ဦး.. သမီးက အိမ်ဆောက်နေတာလေ" ဆိုတဲ့စကားကို ကလေးမလေးက အပြုံးလေးနဲ့ ကျွန်တော်ကို ဆက်ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း "အော် .. ဦး မြင်ပါတယ်ကွယ်. ဒါနဲ့ သမီးက ဘာတွေ ဆောက်နေတာတုန်း" လို့ စိတ်မပါလက်မပါ ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။
ကလေးမလေးကတော့ " သမီးလည်း ဘာတွေ ဆောက်နေမှန်း မသိပါဘူးဦးရယ်။ သဲတွေနဲ့ ထိနေရတာကို သဘောကျလို့ ဆော့နေတာ သက်သက်ပါ" ကလေးမလေးရဲ့ အဖြေကို ကျွန်တော် သဘောကျသွားတယ်.. ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ဖိနပ်ကို ချွတ်လိုက်ပြီး သဲပြင်ပေါ်မှာ ခြေဗလာနဲ့ ရပ်လိုက်မိတော့ ခြေဖဝါးပေါ်မှာ သဲပြင်ရဲ့ နူးညံ့မွအိနေတဲ့ အထိအတွေ့ကို သိသိသာသာ ခံစားမိတယ်။
အဲဒီချိန်လေးမှာ စနိုက်ငှက်ကလေးတစ်ကောင် ကျွန်တော်တို့အနားက သဲပြင်ပေါ်လာနားတာ တွေ့လိုက်ရတော့ ကလေးမလေးက "ဝေး.. ပျော်လိုက်တာ " လို့ ရုတ်တရက် ထအော်တယ်။ "ဘာဖြစ်လို့ ??" ကျွန်တော်က သူ့ကို ပြန်မေးလိုက်တော့ "ပျော်တာလေ ဦးရဲ့.. သမီးမေမေက ပြောဖူးတယ် စနှိုက်ငှက်ကလေးတွေဟာ ပျော်စရာတွေကို ယူလာတတ်တယ်တဲ့။ ခု သမီးတို့ အဲဒီငှက်ကလေးကို တွေ့လိုက်တယ်လေ. အဲဒါ ကံကောင်းတာ ဦးရဲ့ ။ မကြာခင် ပျော်စရာကောင်းတာတွေ ရောက်လာတော့မှာ " ကလေးမလေးက ရွှင်မြူးစွာနဲ့ ဖြေပါတယ်။
ခဏလေးမှာဘဲ စနှိုက်ငှက်ကလေးဟာ သဲပြင်ပေါ်ကနေ ပင်လယ်ဘက်ဆီ တောင်ပံဖြန့်လို့ ပျံသန်းသွားပါတယ်။ "သွားပေတော့ ပျော်ရွှင်မှုလေးရေ.. ငါတော့ ဒုက္ခတွေ နာကျင်မှုတွေနဲ့ အရင်အတိုင်း ကျန်ခဲ့တာပါဘဲလေ" ကျွန်တော် စိတ်ထဲက တီးတိုးလေး ရေရွတ်လိုက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်ချစ်လှတဲ့ အမေ နေမကောင်းကတည်းက ကျွန်တော် စိတ်ဆင်းရဲပြီး ပူလောင်သောက ရောက်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဆေးကုလို့လည်း မသက်သာတဲ့ အမေကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော် သိပ်ကို စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်လက်ရှိ အလုပ်မှာလည်း သူဌေးနဲ့က သိပ်ပြီး အဆင်မပြေတဲ့အတွက် အလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့က မျှော်လင့်ချက် နည်းလွန်းနေပါတယ်။ အမေက နေမကောင်း၊ အလုပ်ကအဆင်မပြေ။ ကံမကောင်းခြင်းတွေ ဆက်တိုက် ဝင်လာပြီး ကျွန်တော့်စိတ်ကို ဖိစီးထားခဲ့တာကြောင့် ပျော်စရာဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးရလောက်အောင် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ ကင်းဝေးနေတာလဲ ကြာပါပြီလေ။ သက်ပြင်းကို ချလိုက်ရင်း ကလေးမလေး အနားကနေ ထွက်ခွာဖို့ ခြေလှမ်းပြင်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကလေးမလေးဟာ မဖော်ရွေတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အပြုအမူအတွက် လွယ်လွယ်နဲ့ လက်လျော့ပုံမရဘဲ
"ဦးနာမည်က ဘယ်လိုခေါ်လဲဟင် " လို့ မေးပြန်ပါတယ်။
"ရောဘတ်.. အပြည့်အစုံက ရောဘတ် ပီတာဆန် "
"သမီးနာမည်က ဝင်ဒီပါ အသက်က ၇နှစ်ရှိပြီ ဦးရဲ့" သွက်သွက်လက်လက် ပြန်ဖြေတဲ့ ကလေးမလေးက တခစ်ခစ်နဲ့လည်း ရယ်မောနေပြန်တယ်။ ဟလို. ဝင်ဒီလို့ ကျွန်တော်က ပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်တော့ "ဦးက ရယ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်၊ အခုမှ သမီးကိုနှုတ်ဆက်တယ်" လို့ပြောပြီး ထပ်ရယ်ပြန်တယ်။ အပူအပင်ကင်းကင်းနဲ့ ရယ်မော ရွှင်ပျနေတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ ရယ်သံလေးက ကျွန်တော့်ကို ပြန်မပြုံးဘဲ မနေနိုင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်လို့ နေပြန်တယ်။ ဝင်ဒီလေးက သူနဲ့ အတူတူ သဲပြင်ပေါ်မှာ ကစားဖို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောတော့ ကျွန်တော်လဲ သူလေးနဲ့ အတူတူ အိမ်ဆောက်တမ်း ကစားဖို့ သဲပြင်ပေါ် အားပါးတရ ထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ ဝင်ဒီနဲ့ ကစားနေချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ ခံစားနေရတဲ့ သောကအပူတွေကို မေ့သွားပြီး ကလေးမလေးနဲ့အတူ ရယ်မောလိုက်၊ အိမ်ဆောက်လိုက် လုပ်နေမိပါတယ်။ မှောင်ခါနီးလို့ အိမ်ပြန်ဖို့ အချိန်တန်တော့မှ ကျွန်တော်ဟာ ဝင်ဒီကို နှုတ်ဆက်ပြီး ကားရပ်ထားရာဆီ လမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့ချိန်မှာ ကျွန်တော့်အနောက်ကနေ ခပ်ဝေးဝေးထိတောင် ကလေးမလေး ဝင်ဒီရဲ့ ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရယ်မောသံလေးနဲ့ အော်သံလေးက လိုက်ပါလို့ နေပါတယ်။
"ဦးရေ.. နောက်တစ်ခေါက်လည်း လာခဲ့ဦးနော်.. နောက်နေ့တွေလည်း ပျော်စရာနေ့လေးတွေဖြစ်အောင် စနှိုက်ငှက်လေး ရှာကြရအောင်နော်"
ကလေးမလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆော့ကစားခြင်းဟာ မယုံနိုင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ကျွန်တော့်ကို ရယ်မော ရွှင်ပျစေနိုင်ခဲ့တယ်။
နောက်ရက်တွေမှာတော့ အလုပ်တွေ ဖိစီးနေတာရယ် ကျွန်တော့်အမေရဲ့ ကျန်းမာရေးက ပိုဆိုးလာတာရယ်ကြောင့် ကမ်းခြေကို ကျွန်တော် မရောက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပူလောင်မှုတွေနဲ့ လူကလည်း ပင်ပန်းနူံးချိ နေခဲ့တယ်။ နေသာတဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့ ကမ်းခြေကို စိတ်ပြေလက်ပျောက် လမ်းလျှောက်သွားဖို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာလည်း ဝင်ဒီပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ပျော်ရွှင်စရာတွေ ယူဆောင်လာပေးတယ်ဆိုတဲ့ စနိုက်ငှက်ကလေး တစ်ကောင်တစ်လေကို တွေ့ချင်မိတဲ့စိတ် ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကုတ်အင်္ကျီကို ထပ်ဝတ်လိုက်ပြီး ပင်လယ်ကမ်းခြေကို ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ကမ်းခြေမှာတော့ ဝင်ဒီနဲ့ ပြန်တွေ့လိမ့်မယ်လို့လည်း ကျွန်တော် မထင်မိခဲ့ပါဘူး။
ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ သဲသောင်ပြင်မွှအိအိလေးနဲ့အတူ လှိုင်းကလေးတွေပြေးလွှားဆော့ကစားနေတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေက အပြောင်းအလဲမရှိ ကျွန်တော့်ကို ဆီးကြိုပါတယ်။ ဆားရနံ့သင်းနေတဲ့ လေပြေကလေးကလည်း ကျွန်တော့်ကို ပွေ့ဖက်ကြည်စယ်လို့ နှုတ်ဆက်လို့ပါဘဲ။ ပင်လယ်နဲ့ သဲသောင်ပြင်ရယ် လေညင်းလေးရယ်က ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့ပါးသက်သာစေပြန်တယ်။ အဲဒီအချိန်လေးမှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ အေးဆေးတည်ငြိမ်လို့ နေခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်က ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ကလေးမလေးကို ကျွန်တော် လုံးလုံးကို မေ့နေခဲ့မိတယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ကလေးမလေးကို ကမ်းခြေမှာ ရုတ်တရက် ပြန်တွေ့လိုက်ရတော့မှ သူနဲ့ဆုံခဲ့တာကို ပြန်သတိရတော့တယ်။ ဒီကလေးမလေးဟာ ကမ်းခြေမှာ နေ့တိုင်းများ ရှိနေခဲ့တာလား လို့လည်း တွေးလိုက်မိပါတယ်။
ကလေးမလေးက ကျွန်တော့်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ "ဟယ်လို မစ္စတာပီ.. သမီးနဲ့ ကစားမလား " လို့ ရယ်မောရင်း နှုတ်ဆက်ပါတော့တယ်။ ရုတ်တရက်တော့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားသလို ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတယ်။ အေချမ်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေကို ပျက်စီးစေလိုက်သလိုပါဘဲ။
ခပ်ဆတ်ဆတ် လေသံနဲ့ ကျွန်တော် ပြန်မေးလိုက်တော့
"သမီးလည်း မသိဘူး.. ဦးကရော ဘာတမ်းကစားချင်သလဲ" လို့ အပြုံးကလေးနဲ့ ပြန်မေးပါတယ်။
"စကားထာ ဖွက်တမ်းကစားမလား " ကျွန်တော်က ခပ်ငေါ့ငေါ့ ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အသက် ၇နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးက စကားထာ ဖွက်တမ်းဘယ်မှာ ကစားနိုင်ပါ့မလဲ။ ကလေးမလေးကတော့ တခစ်ခစ် ရယ်မောရင်း " အဲဒီကစားနည်း သမီးမသိဘူး ဦးရဲ့" လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။
"ကဲ.. ဒါဆိုရင်လည်း လမ်းဘဲလျှောက်ကြတာပေါ့။ " လို့ ကလေးမလေး မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ပြောလိုက်မိတော့ ဝင်ဒီလေးရဲ့ မျက်နှာပေါ်က ရွှင်မြူးရိပ်ကလေးတွေကို ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်။
"ဝင်ဒီ.. သမီးက ဒီကမ်းခြေမှာ အမြဲ ရှိတတ်လား.. အိမ်က ကမ်းခြေနဲ့နီးလို့လား" လို့ မေးခွန်းမေးလိုက်တော့ "သမီးက ဟိုနားမှာနေတာ ဦးရဲ့ " သူညွှန်ပြတဲ့နေရာကို ကြည့်လိုက်တော့ နွေရာသီတည်းခိုတဲ့ အိမ်တန်းလေးတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်အံ့သြသွားမိတယ်။ ခုလို ဆောင်းရာသီမျိုးဟာ ကမ်းခြေကို အပန်းဖြေသူတွေ လာတတ်တဲ့ အချိန်မျိုးလည်း မဟုတ်ဘဲ ဝင်ဒီက ဒီပင်လယ် အနီးတစ်ဝိုက် မြို့ရွာတွေက မဟုတ်ဘဲ ဘာကြောင့် ပင်လယ်ကမ်းခြေကို အလည်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ မစဉ်းစားတတ်အောင် ဖြစ်သွားမိတယ်။ ဒီလိုဆို သမီးက ကျောင်းဘယ်လိုသွားသလဲ လို့ ကျွန်တော်ပြန်မေးမိတော့ "သမီးက ကျောင်းမှ မနေတာဦးရဲ့.. မေမေက ပြောတယ်.. သမီးတို့က ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ အနားယူဖို့လာတာတဲ့ " လို့ ဖြေပါတယ်။
ကမ်းစပ်က သဲပြင်ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေစဉ် တစ်ချိန်လုံး ကလေးမလေးက စကားတွေ တတွတ်တွတ် ပြောနေခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်တော့်အာရုံတွေက သူပြောတဲ့စကားပေါ်မှာ မရှိဘဲ တစ်ခြားနေရာကို စိတ်က ရောက်နေခဲ့မိတယ်။ သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ စနှိုက်ငှက်လေး တစ်ကောင်တစ်လေ တွေ့ရင်တော့ ဝင်ဒီက အသံလေး ခပ်ကျယ်ကျယ်နဲ့ အော်ဟစ်ရယ်မော တတ်ပြန်တယ်။ အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်တော့ ဝင်ဒီလေးက "ဒီနေ့ လမ်းလျှောက်ရတာ ပျော်စရာသိပ်ကောင်းတာဘဲ " လို့ ခစ်ခစ်ရယ်သံလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြောရင်းက "တာ့တာနော်ဦး.. နောက်ကိုလဲ လာခဲ့နော်" လို့ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ဝင်ဒီ့ကို ပြန်ပြုံးပြလိုက်ပြီး "ဟုတ်တယ် ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်.. ဦး နောက်ကို အချိန်ရရင် လာခဲ့ပါမယ်" လို့ပြောလိုက်ပြီး ကမ်းခြေကနေ ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။
နောက်သုံးပတ်လောက်အထိ ကမ်းခြေကို ကျွန်တော် မရောက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ အမေ့ကို အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်လိုက်ရပြီး ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုပါ လုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်မှာ အတော်ကို ဗျာများနေခဲ့ရတယ်။ အမေ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းလို့ ကိစ္စတွေအားလုံးပြီးချိန်မှာ သူဌေးနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ ကျွန်တော် အလုပ် ပြုတ်ပြန်တော့တယ်။ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ ကမ်းခြေကို ရောက်သွားမိတဲ့အချိန်မှာ ဖိစီးနေတဲ့ အပူမီးတွေကြောင့် ဝင်ဒီလေးကို တွေ့ပေမဲ့ နှုတ်ဆက်စကား ပြောချင်စိတ်တွေ ကင်းမဲ့နေခဲ့ပါတယ်။ ဝင်ဒီတို့နေတယ်ဆိုတဲ့ နွေရာသီအပန်းဖြေအိမ်ကလေးရဲ့ ဆင်ဝင်အောက်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ခပ်ဝါးဝါး မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ကလေးမလေးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက သူမလေးကို စောင့်ကြည့်နေဟန် တူပါတယ်။ ဝင်ဒီကတော့ ကျွန်တော့်ကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ပြေးလာရင်း နှုတ်ဆက်စကားဆိုကာ ကျွန်တော့်လက်ကို လာတွဲပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဝင်ဒီကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီး "ဝင်ဒီ.. ဦး ဒီနေ့တော့ တစ်ယောက်တည်းနေပါရစေ.. ဝင်ဒီဖာသာ လမ်းသွားလျှောက်ပါ။ ဦးကို မနှောက်ယှက်ပါနဲ့နော်" လို့ လေသံခပ်တင်းတင်းနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကလေးမလေးရဲ့ ဖြူဖျော့ဖျော့ မျက်နှာလေးက ငိုတော့မလို မဲ့ခနဲဖြစ်သွားပြီး "ဘာဖြစ်လို့လဲ ဦးရဲ့.. သမီးက ဦးကို နေ့တိုင်းမျှော်နေတာ။ ခုလည်း မတွေ့တာကြာလို့ ဦးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ သမီးက ဝမ်းသာမိတာပါ။ " လို့ ပြောရှာပါတယ်။
ကျွန်တော် ဝင်ဒီ့ကို "အေး မင်းက ပျော်တယ် လုပ်နေ.. ငါကတော့ အလုပ်မရှိတော့လို့ စိတ်သောက ရောက်နေတာ" လို့ အော်ပစ်လိုက်မိပြီးမှ "အိုး ဒီလောက်ငယ်သေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ငါ.. ဘာလို့များ ဒီလို လေသံနဲ့ ပြောလိုက်ရတာပါလိမ့်"လို့ နောင်တ ရနေမိပြန်ပါတယ်။
ဝင်ဒီကလေးဟာ တိတ်ဆိတ် ဝမ်းနည်းသံလေးနဲ့ "အို.. ဒီနေ့တော့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့ မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့.. ဒီနေ့ဟာ ဆိုးဝါးတဲ့ နေ့ဖြစ်သွားပြီ " လို့ တီးတိုးလေး ရေရွတ်နေပါတယ်။
"ဟုတ်တယ်.. ဘာမှ ပျော်စရာနေ့ မဟုတ်ဘူး.. ပျော်စရာဆိုတာ ဘာမှန်းကို မသိဘူး" လို့ ကျွန်တော်က ပြန်ပြောမိတော့
"ဦး… အလုပ်ပြုတ်သွားလို့ အရမ်းဝမ်းနည်းနေသလားဟင်" လို့ မေးပါတယ်။
"ဟုတ်တယ် .. ဝမ်းနည်းတယ်.. ဒါကြောင့် ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောချင်ဘူး။ မင်းလဲ ဒီနေရာကနေ သွားတော့. ငါလဲသွားတော့မယ်" လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပြီး ဝင်ဒီကလေးကို လှည့်မကြည့်တော့ဘဲ အဲဒီနေရာကနေ လှည့်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ပုဇွန်လိမ္မော် ပျားရည်ဆမ်းနဲ့ ဘရိုကိုလီချဉ်စပ်သုပ်
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, July 17, 2011 Sunday, July 17, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ပုဇွန် လိမ္မော် ပျားရည်ဆမ်း
ဒီတစ်ပတ် ဟင်းချက်စရာ အတွက် ဖော်ပြချင်တဲ့ ဟင်းသစ်တစ်မျိုးက ပုဇွန်လိမ္မော် ပျားရည်ဆမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေမှ ပျားရည်ဆမ်းတတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုဇွန်တွေမှာလည်း ပျားရည်ဆမ်းကြပါတယ်။ ပုဇွန်ကို ပျားရည်ဘယ်လို ပျားရည်ဆမ်းမလဲဆိုရင် ဒီလိုလေးပါရှင်............
ပထမဦးစွာ ပုဇွန်များကို ခေါင်းချိုးအခွံခွာ၊ သန့်စင်ပြီး ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဟင်းချက်ဝိုင်အနည်းငယ်တို့ဖြင့် နယ်ပြီး အချိန်အတော်ကြာ ထားထားပါတယ်။
ထို့နောက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း များများကို တောက်တောက်စင်း (စက်ဖြင့်ကြိတ်) ပြီး ဆီဖြင့်ကြော်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူဝါရောင်သန်းလာရင် ပုဇွန်များကို ထည့်ကြော်ပါတယ်။
ကြေ်ပြီးပုဇွန်များကို ပန်းကန်ပြားတစ်ခုထဲ ခုလိုထည့်ထားလိုက်ပါတယ်
ခွက်တစ်ခုထဲ လိမ္မော်ရည်နဲ့ ပျားရည်အနည်းငယ်တို့ကို ရောမွှေထားပါတယ်
အိုးထဲ ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ဆီပူလာပါက လိမ္မော်နဲ့ ပျားရည်အရောကို ထည့်ပါတယ်။ ထို့နောက် အရည်များ ခပ်ပျစ်ပျစ်လေး ဖြစ်ရန် ကော်မှုန့်အနည်းငယ်ကို ရေအေးဖြင့်ဖျော်ပြီး အိုးထဲ လောင်းထည့်ပါတယ်။
ထို့နောက် အရည်များကို ပုဇွန်ပေါ် ခုလို လောင်းချလိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာဘဲ ပုဇွန်ကို ပျားလိမ္မော်ရည် ဆမ်းပြီးပြီမို့ အနံ့မွှေးမွှေး၊ အရသာ စပ်စပ်လေးနဲ့ ပုဇွန်လိမ္မော် ပျားရည်ဆမ်းရပါပြီရှင်။
ပုဇွန်လိမ္မော်ပျားရည်ဆမ်းကို ဆီပြန်ချက်စားဖို့ အီလာသူများ ဒီနည်းလေးကို စမ်းပြီးချက်စားနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့က ဈေးထဲမှာ အင်ဥလိုလို ဥတစ်မျိုးကို ပါးပါးလှီး ရေစိမ်ပြီး ရောင်းနေတာ တွေ့တာနဲ့ ဝယ်လာဖြစ်ပါတယ်။ မှိုဥဖြစ်မလား အင်ဥအကြီးစား ဖြစ်မလားတော့ ကျွန်မလဲ မသေချာပါဘူး။ ကျွန်မတို့ဘက်မှာတော့ တစ်ခါမှ ဒီလောက်ကြီးတဲ့အင်ဥတွေကို မတွေ့ဖူးပါဘူး။ ဒီမြို့ကလေးမှာတော့ မိုးရာသီဆို ခုလို ဥမျိုးတွေ ပေါပါတယ်။ ကျွန်မက အင်ဥလို့ဘဲ ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
၄င်း ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ဥကလေးတွေကို ငရုပ်ပွ အနီ အစိမ်းတို့နဲ့ ရောကြော်ဖို့ ခုလို ပြင်ဆင်ပါတယ်။ ထို့နောက် ကြက်သွန်ဖြူ ဓားပြားရိုက်ပြီး ဆီအိုးထဲထည့်ကာ အင်ဥနဲ့ ငရုပ်ပွတို့ကို ရောကြော်ပါတယ်။ ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်၊ ငရုပ်သီးစိမ်း ၊ ခရမ်းချဉ်သီး တို့ထည့်ပြီး အချိန်ခဏကြာရင် အိုးချလို့ရပါပြီ။
စားကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း အင်ဥရဲ့ အရသာနဲ့ ဆင်ပါတယ်။
ဘရိုကိုလီချဉ်စပ်သုပ် ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသုပ်)